I-Toca Kitchen 2 ihlaziyiwe kwaye ivumela ukuba sipheke ngezithako ezingaphezulu | IPhone iindaba
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, besinethuba lokuvavanya i-Toca Kitchen 2 app ngokukodwa kwiintsuku ngaphambi kokuba ifumaneke ngokusemthethweni kwiVenkile ye App. Nawuphi na umsebenzisi onabantwana abancinci Qiniseka ukuba uzame ezinye inani elikhulu lezicelo onokuyifumana kwivenkile yeApple. Njengomgaqo oqhelekileyo, usetyenziso lomphuhlisi alukho simahla, ngaphandle kwamaxesha athile, kuba azinazo iintengiso kuzo, nto leyo eyenza kubenzima kubantwana bethu ukuzonwabela ngaphandle kokuya rhoqo kwisikhangeli okanye kwiVenkile ye App.
I-Toca Kitchen 2 ivumela abantwana bethu ukuba Sika, Qhotsa, Bhaka, Bilisa kwaye udibanise ukuya kuthi ga kwizithako ezingama-23 ezahlukeneyo ukudibanisa nezinongo ezahlukileyo nangayiphi na indlela oyithandayo. Pheka iintlanzi ngenja eshushu, yongeza i-broccoli, incindi yenyama ukudipha iminqathe, i-lettuce smoothie ... kufuneka nje sivumele abantwana bethu basebenzise iingcinga zabo ukonwabela lo mdlalo umnandi.
Olu hlaziyo lutsha kwiToca Kitchen 2 lusizisela:
Ukutya okutsha. Ngoku sinokudala iiresiphi ezintsha ze-crazier ngokudibanisa amaqunube, ivatala, itswele, ii-noodle, irayisi kunye nemilenze ye-octopus.
Izinongo ezintsha. Abantwana bethu banokwenza ukutya kube mnandi ngakumbi ngokongeza iitoni zestumato sauce kunye nesosi yesosi.
Isixhobo esitsha ukupheka ngokukhawuleza: ifryer esinokwenza ngayo iitapile eziqhotsiweyo kunye nentlanzi.
Impendulo entsha evela kubalinganiswa. Kude kube ngoku, ukuqunjelwa kunye nokuthimla kwediners kwisicelo seToca Kitchen kwakuqhelekile, kodwa ngolu hlaziyo lutsha iimpendulo ezintsha zongezwa xa izitya zilungisiwe ezinamaxesha kakhulu kwaye kunzima ukuzetyisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Iimveliso ze-Apple » Ivenkile yosetyenziso » I-Toca Kitchen 2 ihlaziyiwe kwaye ivumela ukuba sipheke ngezithako ezingaphezulu
Vula iApple yokuSebenza kweApple kwi-iPhone yakho ngaphandle kweJailbreak